वृषभ नक्षत्रको बारेमा तपाईलाई जान्नु पर्ने सबै कुरा नेटवर्क मौसम विज्ञान
हजारौं छन् नक्षत्र सम्पूर्ण आकाश भर। आज हामी राशिफलको एउटा तारामण्डलको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं जुन गोरू वा गोरूले प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो बारे मा छ वृष नक्षत्र। यस नक्षत्र तारांकित आकाश मा धेरै imposingly देख्न सकिन्छ र वृश्चिक र लियो नक्षत्र को धेरै नजिक छ। यस क्षेत्रमा जहाँ यो नक्षत्र अवस्थित छ हामी दुई स्टार क्लस्टरहरू पनि फेला पार्दछौं जुन राम्ररी परिचित छ।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई वृषको नक्षत्रको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउन जाँदैछौं।
1 वृषभ नक्षत्र कहाँ छ?
3 नक्षत्र वृषभका मुख्य तारा
4 क्लस्टर र नेबुला
5 वृषभ पौराणिक कथा र ज्योतिष
वृषभ नक्षत्र कहाँ छ?
यदि हामी आकाशमा यो नक्षत्र पत्ता लगाउन चाहन्छौं भने हामीले पहिले मेष राशि नक्षत्र खोज्नु पर्छ। यो नक्षत्र पश्चिममा अवस्थित छ र मिथुन पूर्वमा रहेको थियो। यदि हामीले यी दुई नक्षत्रहरू फेला पार्‍यौं भने, हामी देख्न सक्छौं कि एउटा र अर्को बीचको बीचको बीचमा वृषभ हो।
वृश्चिक र लिओका नक्षत्रहरूको साथ यो सबै भन्दा पुरानो ज्ञात हो। बेबिलोनीहरूको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण तारामंडल थियो जब सूर्यले वृषभ तारामण्डललाई पार गरे पछि उनीहरूले आफ्नो पात्रो सुरू गर्न थाले। यस नक्षत्रको दक्षिणमा हामी ओरियन र पर्सियसको उत्तर (लिंक) फेला पार्न सक्छौं।
यो तारामंडल ग्यालेक्टिक भूमध्यरेखा द्वारा पार गरिएको छ। यो ग्यालेक्टिक इक्वेडर एक हो जो आकाशगंगा दुई मा विभाजित। एकातिर, हामीसंग आकाशीय भूमध्य रेखा छ र अर्को तर्फ हामीसँग अण्डाकार छ। यो वा आकाशमा ताराहरूको प्रक्षेप प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यस नक्षत्रको अर्को मुख्य विशेषता यो हो कि यो दुई खुला तारा समूहमा फेला पर्दछ र हाम्रो ग्रहको नजीक छ। यी दुई स्टार समूहहरूको आफ्नै नामहरू छन्। तिनीहरू प्लाईडेस र हियड्स हुन्। दूरबीन वा टेलिस्कोपको प्रयोग गरेर हामी यस तारामंडललाई सापेक्षिक सहजताका साथ अवलोकन गर्न सक्छौं। थप शुरुवातकर्ताहरूको लागि हामी दायराको टेलिस्कोपहरू सिफारिस गर्दछौं स्काइवाचर। तिनीहरू चिन्न एकदम सजिलो छ किनकि तिनीहरू अन्तरिक्षमा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ।
नक्षत्र वृषभका मुख्य तारा
यो तारा, समूहहरू र विभिन्न प्रकारको नक्षत्र हो नेबुला। एक ठूलो स्टार क्लस्टर भएको, हामी कसरी सबैभन्दा लोकप्रिय हो भिन्न गर्न थाहा हुनु पर्छ। हामी ती राम्रा चिनिएका ताराहरू र तिनीहरूका मुख्य विशेषताहरूको एक सूची बनाउँदछौं:
Aldebaran: यसको मुख्य विशेषता यो हो कि यो सम्पूर्ण नक्षत्रमा चम्किला तारा हो। यसको रातो र सुन्तला रंगको बीचको रंग छ जुन एकदम गहन छ। यो के हो यसलाई पहिचान गर्न एकदम सजिलो बनाउँदछ। यो सामान्यतया अर्को ताराको साथ हुन्छ जुनसँग कम चमक छ।
Alcione: यो प्ल्याडेस क्लस्टरको सबैभन्दा चम्किलो तारा हो। क्लस्टरहरूमा सबै ताराहरूमध्ये यो सबैभन्दा कान्छो छ।
टउरी, डबल तारांकित: यसले यो नाम प्राप्त गर्दछ किनकि पहिलो हेराईमा उनीहरूलाई देख्न सकिन्छ कि तिनीहरू दुई धेरै नजिकको तारा थिए। यस कारणले गर्दा यसलाई बाइनरी ताराहरू पनि भनिन्छ र तिनीहरू सेता हुन्।
टाउरी, सर्पिल अनुक्रम को बोट स्टार: यो लामो नामको साथ हामी कुराकोटी तारा A को एक प्रकारको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन विकासको चरणमा छ। यो तारा हाइड्रोजनको फ्यूजनबाट हीलियममा उत्पन्न हुन्छ। यो रासायनिक प्रतिक्रिया सूर्यमा जस्तै हुन्छ।
क्लस्टर र नेबुला
अब हामी क्लस्टर र नेबुलाको बारेमा कुरा गर्ने छौं जुन यस वृषको नक्षत्रले समावेश गर्दछ। हामीले पहिले नै उल्लेख गरेका थियौं कि यससँग दुई प्रकारका क्लस्टरहरू छन्: प्लीएड्स र हियड्स। प्लीएड्स stars ताराहरूको समूह हो जुन यस नक्षत्रमा अवस्थित छन् र जुन पृथ्वीको सब भन्दा नजिक छ। तिनीहरू यस तारामंडलमा सबै ताराहरूका सब भन्दा दृश्यमान मानिन्छ र धेरै पुराना छन्। तिनीहरूको प्रसिद्धि यस तथ्यको कारण हो कि उनीहरू इतिहासको माध्यमबाट फैलिएका छन् र असंख्य पौराणिक कथा र मिथकहरूमा देखा पर्न व्यापक रूपमा मान्यता प्राप्त छ।
हाइड्स अन्तरिक्षमा ताराहरूको अर्को मान्यता प्राप्त र सबैभन्दा पुरानो क्लस्टर हो। यो अनुमान गरिएको छ कि ती करिब 625२XNUMX मिलियन वर्ष पुरानो हो।
नेबुलाका लागि पनि त्यहाँ यस नक्षत्र भित्र केही छन्। पहिलोलाई क्र्याब नेबुला भनिन्छ। यो एक नेबुला हो कि बाँकीले गठन गरेको छ कि एक सुपरनोवा छोडियो। १०overy1.054 मा अरब र चिनियाँ खगोलविद्हरूले आविष्कार गरेका थिए। यस निहारिका बीचमा हामी दुई तारे देख्न सक्छौं तर कम चमकको साथ। यस नेबुलाका विशेषताहरू राम्रोसँग बुझ्नको लागि गरिएको अध्ययनहरूमा यो पत्ता लाग्यो कि यसले शक्तिशाली विद्युत चुम्बकीय विकिरणको उत्सर्जन गर्दछ।
वृषको नक्षत्रले बोलाएको नेबुलाको अर्को परावर्तन नेबुला। यसको मुख्य विशेषता यो हो कि यसमा निलो र color र रासायनिक ग्यास, फलाम, हाइड्रोजन, अक्सिजन, सिलिकॉन, कार्बन र तारकीय धूलोको संरचना छ।
वृषभ पौराणिक कथा र ज्योतिष
आकाशमा नक्षत्रहरूको बारेमा धेरै मिथक र कथाहरू छन्। ग्रीक पौराणिक कथाको अनुसार वृष राशिले मिनोटाउरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो मिनोटाउर ज़ियस एउटा गोरुमा परिणत भएको बाहेक अरु केही होइन। पौराणिक कथामा यो भनिएको छ कि जीउस यूरोपाको गहिरो प्रेममा थिए र आफूलाई एक सुन्दर र नम्र साँढेमा परिणत गर्ने निर्णय गरे। युरोपा, उसलाई देखेर, त्यसमा उक्लन्छ र जियसले उनको अपहरण गर्न र समुद्रमा डुब्न सक्षम हुन अवस्थाको फाइदा लिन्छ। यो त्यहाँ छ जहाँ उहाँ यसको स्वामित्व राख्नुहुन्छ र उनीहरूका तीन छोराको नाम मिनोस, राडामन्तिस र सर्पेडोन छ।
पौराणिक कथाले यी बच्चाहरूको अस्तित्वको बताएको क्षणबाट, यो हो जब मिनोस वृष राशिको नक्षत्र प्रतिनिधित्व गर्दछ। अर्कोतर्फ, मिश्री पौराणिक कथामा यस तारामंडललाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ओसिरिस र ईसिस देवताहरू। यी दुई देवताहरू शरीरको आधा गोरु आधा गाईको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यो नक्षत्र राशिमा दोस्रो हो र यसको शासक हो ग्रह भेनस। जो मानिस वृषभ चिन्ह अन्तर्गत जन्म लिन्छन् अधिक संवेदनशील हुन्छन्। तिनीहरू भनिन्छ मानिसहरू जो पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकिन्छ र प्रायः उत्कृष्ट साथीहरू र प्रेमीहरू हुन्छन्। तिनीहरू पनि धेरै धैर्य मानिस हुन् र शारीरिक र बौद्धिक शक्ति भएको द्वारा चित्रित।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने नै, वृषभ राशिको नक्षत्र विश्वभर परिचित छ। मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं यसको बारेमा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » वृषभ नक्षत्र
के गुँड छ